Ry kristianina havana, mankalaza ireo Arakanjely telo isika anio dia i Masina Misely, Masina Rafaely ary i Masina Gabriely. Ny asan'ny anjely voalohany dia ny midera an'Andriamanitra, any an-danitra. Tompom-peo ananantsika izy ireo, noho izany, mankalaza an'Andriamanitra. Ary izay voninahitr'Andriamanitra izay no tanjon'ny fiainana kristianina. Asan'ny anjely sy ny arakanjely koa ny manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra amintsika olombelona, toy ny hoe miaro antsika, mampita ny hafatr'Andriamanitra, ahafantarantsika sy hanatanterahantsika ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy ho anjely na oviana na oviana isika. Ny tsy fananan'izy ireny tsiny dia toetra raikitra araka ny naharian'Andriamanitra azy ireny. Ny fahalavorariana kosa ho antsika, dia ny fandresena tamin'ny ady niaraka tamin'i Kristy. Niady nanohitra ireo anjely ratsy. Toetran'ny anjely araka ny Evanjely teo, ny fanekena an'Andriamanitra, ny fahatsorana, ny tsy misy fitaka. Ny fanekena an'Andriamanitra, izany hoe ny finoana tsy misy famahoany, miaina an'Andriamanitra ambadiky ny hita maso. Ny fahatsorana kosa, satria mahita ny miafina indrindra Andriamanitra. Aoka àry, hanandratra fiderana an'Andriamanitra isika, miaraka amin'ny anjely sy ny arakanjely. Ary antsoy amim-pitokiana isan'andro ny anjely mpiambina antsika. Amen